Angel Di Maria Oo Heshiis Cusub U Saxiixay Kooxda PSG.
HomeWararka CiyaarahaAngel Di Maria oo heshiis cusub u saxiixay kooxda PSG.
March 13, 2021 Wararka Ciyaaraha 0
Paris Saint-Germain ayaa sii dheereysatay qandaraaskii Angel Di Maria ee ahaa inuu kooxda ku sii hayo xilli ciyaareed kale Angel Di Maria ayaa heshiis cusub oo hal sano ah la galay Paris Saint-Germain.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Argentina, oo 33 jir ah, ayaa ogolaaday heshiis cusub oo kooxda ku sii hayn doona ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo uu dooranayo sannad dheeri ah.
Di Maria ayaa kula guuleysatay 16 koob PSG tan iyo markii ay ka soo saxiixatay Manchester United sanadkii 2015 lacag dhan 63 milyan euro.
248 kulan oo tartamada oo dhan ah, ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa dhaliyay 86 jeer wuxuuna bixiyay 99 caawin, waana ninka labaad ee ugu sareeya taariikhda kooxda isagoo ka dambeeya Safet Susic oo 103.
Isaga oo hadlaya bishii hore, agaasimaha isboortiga Leonardo wuxuu xaqiijiyay in Di Maria uu ka mid ahaa afar qandaraas oo muhiim ah oo PSG ay dooneysay inay dhameystirto.
Sidoo kale wadahadalo heer sare ah oo ku saabsan heshiisyada cusub ee Kylian Mbappe iyo Neymar, Les Parisiens ayaa sidoo kale doonaya Juan Bernat inuu saxeexo heshiis cusub.
“Qandaraaska Kylian Mbappe, muddo dheer ayaan wada hadalnay,” ayuu Leonardo u sheegay France Bleu.
Kahor, inta badan waxay ahayd in laga caddeeyo mowqifkeenna iyo waxa aan rabno. Waxaan u maleynayaa inaan gaarno halka ay tahay inaan qaadno jago iyo go’aan. Waxaan leenahay wadahadal furan oo wanaagsan.
Waxay ku socotaa wadada saxda ah oo ah Neymar laakiin aakhirka wuxuu go’aamiyaa goorta la saxeexayo welina kiiska ma ahan. Waxaan ku jirnaa isla bogga, waxaan u maleynayaa; isku mid Di Maria iyo Bernat.
Kuwani waa afarta arrimood ee aan ka wada hadalnay. Fikradda ayaa ah in sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah loo tago, maxaa yeelay dhinacayaga, waxaan damacsan nahay inaan dib u cusbooneysiino afarta.
Di Maria ayaa 27 kulan u saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, isagoo bixisay afar gool iyo 10 caawin.
Waa ciyaaryahanka afaraad ee ugu wax soo saarka badan PSG marka loo eego ku lug lahaanshaha tooska ah ee 2020-21, gadaashiisa Moise Kean (16), Neymar (17) iyo Kylian Mbappe (35).